मेरो ३७ बर्षीय श्रीमानमा पहिलेको जस्तो शारीरिक सम्बन्धमा रुचि छैन? के यो उमेरका कारणले हो? – Rastriyapatrika
मेरो ३७ बर्षीय श्रीमानमा पहिलेको जस्तो शारीरिक सम्बन्धमा रुचि छैन? के यो उमेरका कारणले हो?
मेरो श्रीमान् ३७ वर्षको हुनुभयो अब उहाँलाई पहिलेको जस्तो शारीरिक सम्बन्धमा रुचि छैन? (याैन जिज्ञासा समाधान)”
यौन क्रियाकलापमा राम्रोसँग र निरन्तर रूपमा संलग्न हुन एकातिर यौनेच्छा हुनुपर्छ भने अर्कातिर मानसिक एवं शारीरिक दुवै रूपमा यौनसम्पर्कका लागि तयार हुनुपर्छ । यौनेच्छा नै नहुने वा कम यौनेच्छा हुने स्थिति (hypoactive sexual desire) मा यौनसम्पर्क राख्ने चाहना, यौन परिकल्पना तथा यौन क्रियाकलाप महिनाको दुई पटकभन्दा कम भएको अवस्थालाई जनाउँछ, तर यसो भन्दैमा महिनामा एकपल्ट मात्र यौनसम्पर्क राख्ने जोडीलाई यो समस्याबाट पीडित भनिहाल्न मिल्दैन, यदि दुवै जना यसमा सन्तुष्ट छन् भने ।
एकनासेपनका कारणले यौनसम्बन्धमा रुचि नभएजस्तो लाग्छ भने नयाँ–नयाँ किसिमका यौन आसन वा यौन क्रियाकपापमा संलग्न भै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । दुई व्यक्ति अर्थात् श्रीमान्–श्रीमती दुवै संलग्न हुनुपर्ने भएकाले यसमा दुवैको सहमति एवं समझदारी पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । साप्ताहिकबाट साभार